Row count အတန်း အရေအတွက်	 Details
2018-11-02 20:25:54 UTC
Column count ကော်လံ အရေအတွက်	 Details
2018-11-02 20:26:04 UTC
ကိုးကား စာသားကို အမြင်အာရုံ အတွက် အလေးပေးပါ။ "တခြားသူများအား ကိုးကားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့ ကိုယ်ကို ကိုးကားသည်။" — Julio Cortázar	 Details
ကိုးကား စာသားကို အမြင်အာရုံ အတွက် အလေးပေးပါ။ "တခြားသူများအား ကိုးကားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့ ကိုယ်ကို ကိုးကားသည်။" — Julio Cortázar
2018-11-02 20:42:41 UTC
Looks like this is not the correct kind of file. Please link to an appropriate file instead. ကြည့်ရတာ ဖိုင်အမျိုးအစား အမှန်ဟုတ်ပုံမပေါ်ဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်တော်ရာ ဖိုင်ကို လင့်ခ် ပြန်လုပ်ပေးပါ။	 Details
Looks like this is not the correct kind of file. Please link to an appropriate file instead. Looks like this is not the correct kind of file. Please link to an appropriate file instead.
ကြည့်ရတာ ဖိုင်အမျိုးအစား အမှန်ဟုတ်ပုံမပေါ်ဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်တော်ရာ ဖိုင်ကို လင့်ခ် ပြန်လုပ်ပေးပါ။
2017-06-02 08:18:08 UTC
2022-05-02 19:53:03 UTC
This theme does not support video headers on this page. Navigate to the front page or another page that supports video headers. ဤ theme သည္ ဗြီဒီယုိေခါင္းစည္းအား ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ အေထာက္အပံ့မေပးပါ။ ဗြီဒီယုိအား အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ စာမ်က္ႏွာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားစာမ်က္ႏွာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းပါ။	 Details
ဤ theme သည္ ဗြီဒီယုိေခါင္းစည္းအား ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ အေထာက္အပံ့မေပးပါ။ ဗြီဒီယုိအား အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ စာမ်က္ႏွာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားစာမ်က္ႏွာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းပါ။
2016-11-16 12:56:57 UTC
Zox Zin Min (zoxy)
Passwords cannot contain the "%s" character. စကားဝွက္တြင္ "\_" အကၡရာ ပါဝင္၍ မရပါ။	 Details
စကားဝွက္တြင္ "\_" အကၡရာ ပါဝင္၍ မရပါ။
2016-11-16 13:00:08 UTC
2020-11-07 16:09:26 UTC
This means that the contact with the database server at %s was lost. This could mean your host&#8217;s database server is down. ဤသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ database server %s တြင္ ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ေနသည္ဟု ဆုိလုိပါသည္။ ဆုိလုိရင္းမွာ သင္ host လုပ္ထားေသာ database server down ေနသည္။	 Details
2016-01-18 16:00:29 UTC
%1$s %2$s %1$s - %2$s	 Details
2014-12-18 19:02:06 UTC
2021-02-21 15:06:01 UTC
Bulk select တစ်ပြိုင်တည်းရွေး	 Details
2014-11-27 13:45:32 UTC
Search media မီဒီယာ ရှာရန်	 Details
2014-09-01 16:07:26 UTC
Uploaded by: ပို့တင်သူ	 Details
Uploaded to: ပို့တင်ခဲ့သော နေရာ	 Details
2020-11-07 16:09:28 UTC
If you are looking to paste rich content from Microsoft Word, try turning this option off. The editor will clean up text pasted from Word automatically. Microsoft Word မှ အကြောင်းအရာများအား ဖြည့်ကူးလိုလျှင် ဒါကို ပိတ်ထားပါ။ ဖြည့်ကူးလိုက်သော စကားလုံးများမှ စာသားများအား အယ်ဒီတာမှ အလိုအလျှောက် ရှင်းလင်းပေးပါမည်။	 Details
Microsoft Word မှ အကြောင်းအရာများအား ဖြည့်ကူးလိုလျှင် ဒါကို ပိတ်ထားပါ။ ဖြည့်ကူးလိုက်သော စကားလုံးများမှ စာသားများအား အယ်ဒီတာမှ အလိုအလျှောက် ရှင်းလင်းပေးပါမည်။
2014-09-01 16:07:25 UTC
2022-05-02 19:52:33 UTC
&#8592; Cancel audio playlist &#8592; တေးသီချင်းစာရင်း ပယ်ဖျက်ရန်	 Details
&#8592; တေးသီချင်းစာရင်း ပယ်ဖျက်ရန်
2014-09-01 16:07:22 UTC
2020-07-19 12:46:32 UTC
Edit audio playlist တေးသီချင်းစာရင်း ပြုပြင်ရန်	 Details
2014-09-01 16:07:24 UTC